Megan Powers waa Sarkaalka Barnaamijka Caalamiga ah ee McKnight Foundation. Waxay la shaqaysaa daneeyayaasha Barnaamijka Cilmi-baarista Cagaaran ee loo yaqaan 'Collaborative Research Program (CCRP) si looga qaybgalo horumarinta istaraatiijiyadeed iyo barashada, si loo hubiyo in hawlgallada caalamiga ahi ay si habboon u shaqeeyaan, iyo in la maareeyo qaababka taageerada ee deeq bixiyayaasha iyo la-hawlgalayaasha.
Ka hor inta uusan ku biirin McKnight, Powers wuxuu ahaa lataliye sare oo ka tirsan Grassroots Solutions, oo ah shirkad ku takhasusay istaraatiijiyada, abaabulidda, tababarka, iyo qiimeynta. Doorkaas, waxay maamushay haya'daha aan faa'iido doonka ahayn, kuwa dadweynaha, iyo deeq-bixiyeyaasha, kuwaas oo ay siisay fududeyn, isku-darsamid, la talin, qiimeyn, iyo qorsheyn si ay uga caawiso dhisidda guusha. Waxay sidoo kale qabatay hoggaaniyad hogaamineed oo laba ka mid ah oo aan faa'iido doon ahayn: Asian Americans & Pacific Islanders ee Philanthropy, halkaas oo ay hoggaaminaysay dadaalada kartida leh ee Ololaha Qaran ee Sinaanta iyo Sinnaanta, iyo Udoodaha Xuquuqda Aadanaha, halkaas oo ay ku amartay barnaamij waxbarasho oo xuquuqda aadanaha ah dadaalka looga hortagayo foosha carruurta ee kuyaala baadiyaha Nepal.
Awoodayaashu waa deeq bixiye hore Fulbright iyo saaxiibka Rotary ee Dunida. Diyaarinta Isbaanishka, waxay dhamaysay barnaamijka qalin-jabinta xalinta khilaafka caalamiga ah ee Universidad del Salvador ee dalka Argentina oo haysta BA ka Jaamacadda St. Thomas. Waxay ku tabarucday dhowr hay'adood oo Minnesota ah, oo ay ka mid yihiin Madaxda Xarunta Cadaaladda iyo Qaadashada Minnesota.